ICOBRA KAI ABADALI BAHLEKISA NGOLWAZI OLUNOMDLA MALUNGA NEXESHA LESI-4 - IINDABA
ICobra Kai Abadali bahlekisa ngolwazi olunomdla malunga nexesha lesi-4
Ukulandela ukunqumama okukhawulezayo kwimveliso ngenxa yobhubhane we-coronavirus, ixesha leCobra Kai 4 laqala ukuthimba ngoJanuwari. Omnye wabadali benkqubo kunye nabavelisi bakarhulumente, uJon Hurwitz, kutshanje utyhile kwimithombo yeendaba zentlalo ukuba abalingisi kunye nabasebenzi bagqibela ngokuhlala emva kokufota ixesha elizayo leenyanga ezi-4 e-Atlanta, Georgia. Inkqubo ye- Iposi le-Twitter , ilayishwe ngoMeyi 1, yayiquka umfanekiso kaHurwitz kunye nabenzi bemiboniso eyahlukeneyo, uJosh Heald noHayden Schlossberg.
Siyahamba, siya, kwakhona, kwakhona, siye eCali, Cali! Kwakuyingxaki yokufota ixesha likamabonwakude kulo lonke ubhubhane, nangona kunjalo iqela lethu kunye neqela lethu laqhubeka, labethwa nzima, kwaye laluma okhozi yonke imihla. Iziphumo zokugqibela zinokuba lelona xesha lethu lokuzithemba kodwa! Awunakulinda ukuze uyibone! funda i-tweet.
Umboniso wabanye abaSebenzi abaDala nabo babelane ngolwazi malunga nexesha le-4 kwi-Twitter
Ifoto: GettyUJosh Heald, uJon Hurwitz, kunye noHayden Schlossberg baya kumboniso wokuqala weCobra Kai isizini 2.
U-Heald wongezwa ngeposi(* 4 *)ukukhumbula ixesha le-4 elilungiselelwe imveliso yasemva kwemveliso. Uye wavuma ukuba uqhuba i-pendulum ukusuka ekuphelelweni ukuya kukuzonwabisa (kwaye kwakhona kwakhona) kwiinyanga ezi-4 ezidlulileyo. Uqhubeke wathi [i] ndiziva ndikhulu ukusonga isizini yesine yalo mboniso, nangona kunjalo ucacisile ukuba kuvakala nokuba kuphezulu kakhulu ukuqonda ukuba [boyisile] elona xesha labo linesibindi kodwa.
Ngokufanayo, ngo-Epreli 29, Schlossberg Iinkcukacha zokuhlekisa malunga nexesha elizayo kwiakhawunti yakhe ye-Twitter. Wacebisa ukuba abalandeli be-karate franchise, njengaye, baya konwaba kwiCobra Kai isizini 4.
Kuyomeleleyo ukutsho ukuba zeziphi izihlandlo endizithandayo zeCobra Kai, nangona kunjalo kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo sidubule izinto ezilwa nezinto esizigqibileyo. Umlandeli weKarate Kid kum akakwazi ukucinga ukuba kuqhubeka ntoni. # CobraKai4, ubhale uSchlossberg.
Ixesha le-4 ngoMeyi linokubandakanya uVillian ovela kwiKarate Kid Icandelo III
Ifoto: GettyURalph Macchio ufotwa kwi-'The IMDb Show 'ngo-2019.
Abenzi bemiboniso bebengaqwalaseli malunga nento eyenze iCobra Kai isizini ye-4 ngokukodwa. Nangona kunjalo, isekwe ikakhulu kwingxelo eyenziwe nguRalph Macchio ipodcast yeSway , Ixesha lesine linokuqulatha abalinganiswa abavela kumdlalo bhanyabhanya ka-1989 I-Karate Kid Part III. Ngexesha lodliwanondlebe lwangoJanuwari, umdlali weqonga wabonisa ukuba wayengenguye umlingisi webhanyabhanya, njengoko wayekholelwa ukuba umlinganiswa wakhe uDaniel LaRusso ubuyile.
'Ndaziva nje ngomlinganiswa weLaRusso - akazange nangayiphi na indlela aqhubeke. Bekuvakala ngathi besiphinda senza ifilimu yokuqala ngohlobo lwekhathuni ngengqondo nangaphandle kwesibindi nomphefumlo, kuchaza umdlali weqonga.
Uvumile, nangona kunjalo, ukuba wamkela ilifa lomdlalo bhanyabhanya emva kokuzibandakanya noCobra Kai noHurwitz, uHeald noSchlossberg.
UJon, uJosh, kunye noHayden ngabalandeli abakhulu be 'Karate Kid Part III,' utshilo umdlali.
Ngo-Epreli 2020, iSchlossberg ngokongeza ityhilwe kwi-Twitter ukuba oyena mntu amthandayo kwiKarate Kid franchise nguTerry Silver (Thomas Ian Griffith). Njengokuba abalandeli besazi, usomashishini wenza iinzame zokonakalisa ubuchule bemfazwe be-karate kunye nethemba lokuphumelela i-All Valley Tournament ye-1985 kwi-Karate Kid Part III. Kwi Ixesha lokugqibela le-3 , Cobra Kai sensei John Kreese (Martin Kove) ubonakala enxibelelana neSilver ngoncedo lwakhe ngokukhawuleza.
Ngelixa kungakhange kuqinisekiswe ngabenzi bemiboniso, uRobert Mark Kamen, owabhala imifanekiso ephambili yokuqala yeKarate Kid, wachaza ukuba uThomas Ian Griffith usenokuphinda abambe isikhundla sakhe. Ngexesha lokuhamba komjelo kaFebruwari, ilayishwe kwisiteshi seCobra Kai Theory seYouTube Uqinisekisile ukuba iSilver inokuba ikwixesha lesi-4 nakwixesha lesi-5 leCobra Kai.
Abathandi baya kufumanisa ngokukhawuleza ukuba iSilver ibonakala ngathi iyenzeka kumdlalo, kuba ixesha lesine likaCobra Kai ngokungathandabuzekiyo liya kubakho ukusasaza kwiNetflix ngasekupheleni kuka-2021.
Izigaba: Hulu Umqala Hollywood
iintsomi zangomso hulu
Ukuphakama komhla kaJason kunye nobunzima
yi-chick fil usuku oluvulekileyo lwesikhumbuzo
j lo isuti yekati
Iziko laseKennedy lihlonipha usasazo lwe-TV